Xasan Sheekh oo lakulmay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif +SAWIRRO | Wardoon
Home Somali News Xasan Sheekh oo lakulmay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif +SAWIRRO
Xasan Sheekh oo lakulmay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif +SAWIRRO
Ugaaska Xasan Ugaas Khaliif ayaa Howgiisa kusoo dhaweeyay Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ee booqashada ugu yimid, waxa uuna sheegay in uu ku faraxsan yahay in Baladweyne yimaado Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Xildhibaan C/risaaq Cumar wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya, qeybna ka ah wafdiga Xasan Sheekh ayaa sheegay in booqashada iyo kulanka ay maanta ugu tageen Ugaaska uu yahay mid horu dhac ah ayna jiri doonaan kulamo kale.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hada ah Gudoomiyaha xisbiga Mucaaradka ee Midowga Nabadda iyo Horumarka ayaa shalay booqasho ku tagay magaalada Baladweyne ,halkaas ay maalmo joogi doonaan.
Previous articleXILDHIBAN FIQI:-XARAASHKA XIRMOOYINKA SHIDAALKA SOOMAALIYA.
Next articleLafta Gareen oo la kulmay Mukhtaar Roobow
DAAWO:-Wasiirkii “Maantoo kalena madaxaa na furan” oo shaaciyey ujeedka uu...
Daawo:- Kheyre iyo Omar Finish Oo Ku Heshiiyay. In Lalaayo Mucaaradka.